Caves Manufacturers - Shiinaha Ayaa Caabudiya Shirkadaha & Warshadaha
Wejiga culus ee Caagagga Weyn ee Daboolka Caagga ah
Magaca Badeecada Weyn ee Weyni Xaraashka ah Caarada Weelka Caagga ah ee Caarada Wejiga Sifeynta Alaabada 40 * 28 * 20cm Buluug / Buluug Alaabada Alaabada PP Waxyaabaha alaabada NA-17 Waxyaabaha Alaabada Sifeeyaa in la nadiifiyo labo midab si loo doorto Meel ballaadhan iyo naqshadeynta dhagaxa dhagaxa Waxyaabaha aan sunta ahayn si loo xaqiijiyo a jawi aamin ah oo caafimaad qaba Hordhac Wax soosaarahan godan waxaa laga sameeyay waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin PP Waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin, Huuq godka iyo weelka biyaha lagu qubo Wuxuu ka caawiyaa xayawaanku inay cunaan cuntada oo ay qarsadaan.
Goobaha Caagga ah ee Caarada Sameeyaa Caag Caag ah
Magaca Badeecada Yar yar ee Dabeecadda ah Humidify Caag Weelka Caagga ah ee Caagga Saambalka Tayada Alaabta Alaabta Alaabta Alaabta 24.5 * 15 * 15cm Buluug / Buluug Alaabada Alaabta PP Waxyaabaha alaabada NA-16 Waxyaabaha Alaabta ay Sahal tahay in la nadiifiyo laba midabbo si loo doorto meel ballaadhan iyo naqshada dhagaxa dhagaxa Alaabada aan sunta ahayn si loo xaqiijiyo a jawi aamin ah oo caafimaad qaba Hordhac Wax soosaarahan godan waxaa laga sameeyay waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin PP Waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin, Huuq godka iyo weelka biyaha lagu qubo Wuxuu ka caawiyaa xayawaanku inay cunaan cuntada oo ay qarsadaan.
Godka Caagga ah ee Caagga leh
Magaca Badeecada Caagga ah ee Caagga ah ee Caagga leh ee Sheybaarka Masawirida Ceramic Ceymiska Nooca 10 * 16.8 * 7cm Caddaan / Madow Badeecad Alaabta PP Waxyaabaha alaabada NA-15 Waxyaabaha Tilmaamaha Qaab fudud, Miisaan yar, qurux iyo waxtar leh. Adeegsiga balaastiig tayo sare leh, oo aan sun lahayn iyo wax aan dhadhan lahayn. Laba midab oo aad doorato. Qarsoonida godka iyo baaquli cunto ah oo ku saabsan waxyaabaha xammaasha. Iyada oo la adeegsanaayo saxan biyo ah dhoobada. Hordhaca Alaabta Godka godka waxaa laga sameeyay qalab "PP"
Caagga Caagga ah ee Dhalada leh
Magaca Alaabada Soosaarka Caagga ah ee Caagga Weelka Bowl Gaarka ah Nooca Sheyga 12.2 * 8.8 * 7cm Caddaan / Madow Badeecada Alaabta PP Waxyaabaha alaabada NA-14 Waxyaabaha Tilmaamaha Qaab fudud, Miisaan yar, qurux iyo waxtar leh. Adeegsiga balaastiig tayo sare leh, oo aan sun lahayn iyo wax aan dhadhan lahayn. Laba midab oo aad doorato. Qarsoonida godka iyo baaquli cunto ah oo ku saabsan waxyaabaha xammaasha. Hordhaca Alaabta Godka godka waxaa laga sameeyay Waxyaabaha loo yaqaan 'PP wax yari' Naqshad wanaagsan oo loogu talagalay waxyaabaha wax lagu cafiyo ama lagu cuno cuntada
Caagagga Weelka Caagga ah ee loo yaqaan 'Restile Cave Cave NA-12'
Magaca Badeecada Soocelinta Caagagga ah ee Caagagga ah ee Caagga ah Suuqa Alaabada Nooca Alaabada Nooca NA-12 250 * 160 * 112mm 112 Alaabada Alaabada Alaabada PP Waxyaabaha alaabada NA-12 Waxyaabaha Tilmaameedka ah Qaab fudud, qurux badan oo waxtar leh. Adeegsiga balaastiig tayo sare leh, oo aan sun lahayn iyo wax aan dhadhan lahayn. Godadka qarada caagga ah ee lagu gado Sharraxaado badan iyo qaabab ayaa la heli karaa. Hordhaca Alaabta Godka godka waxaa laga sameeyay qalab 'PP Waxyaabo la taaban karo oo loogu talagalay dadka wax qarinaaya
Caagagga Weelka Caagga ah ee loo yaqaan 'Restile Cave Cave NA-11'
Magaca Badeecada Soocelinta Caagagga ah ee Caagagga ah ee Caagga ah Suuqa Alaabada Nooca Alaabada Nooca NA-11 100 * 105 * 80mm Badeecada Alaabada Cuntada PP Lambarka alaabada NA-11 Waxyaabaha Tilmaameedka ah Qaab fudud, qurux badan oo waxtar leh. Adeegsiga balaastiig tayo sare leh, oo aan sun lahayn iyo wax aan dhadhan lahayn. Godadka qarada caagga ah ee lagu gado Sharraxaado badan iyo qaabab ayaa la heli karaa. Hordhaca Alaabta Godka godka waxaa laga sameeyay qalab 'PP Waxyaabo la taaban karo oo loogu talagalay dadka wax qarinaaya
Caagagga Weelka Caagagga ah ee loo yaqaan 'Restile Cave God' NA-09 NA-10
Magaca badeecada Soocelinta Caagagga ah ee Caagagga Caagga ah ee Sheybarka Waxyaabaha Sheyga Badeecadaha NA-09 220 * 105 * 103mm Orange NA-10 140 * 103 * 83mm Alaabada Alaabada Alaabada PP Alaabada Lambarka NA-09 NA-10 Tilmaamaha Saameynta Qaab-dhismeed fudud, qurux badan oo waxtar leh. Adeegsiga balaastiig tayo sare leh, oo aan sun lahayn iyo wax aan dhadhan lahayn. Godadka qarada caagga ah ee lagu gado Sharraxaado badan iyo qaabab ayaa la heli karaa. Hordhaca Alaabta Godka godka waxaa laga sameeyay qalab 'PP Waxyaabo la taaban karo oo loogu talagalay dadka wax qarinaaya
Godka Cayaaraha Caagga ah ee Jawaab celis ah NA-07 NA-08
Magaca Badeecada Magaca Suuqa Soocelinta Caagga ah ee Caagagga ah ee Noocyada Waxyaabaha Sheyga Badeecadaha NA-07 170 * 150 * 110mm Caddaan NA-08 130 * 111 * 85mm Alaabada Caddaan Alaabada PP Lambarka NA-07 NA-08 Sifooyinka Alaabada Qaab fudud, qurux iyo waxtar leh. Adeegsiga balaastiig tayo sare leh, oo aan sun lahayn iyo wax aan dhadhan lahayn. Godadka qarada caagga ah ee lagu gado Sharraxaado badan iyo qaabab ayaa la heli karaa. Hordhaca Alaabta Godka godka waxaa laga sameeyay qalab 'PP Waxyaabo la taaban karo oo loogu talagalay dadka wax qarinaaya
Caagagga Weelka Caagagga ah ee loo yaqaan 'Caagagga Weelka' NA
Magaca Badeecada Magaceeda Reptile Cayashka Qarsoodiga ah ee Caaga ah Noocyada Waxyaabaha Sheegma Alaabada Nooca NA-06 155 * 112 * 108mm Alaabada Alaabada Alaabada PP Nambarka Ala-06 Waxyaabaha Tilmaameedka ah Qaab fudud, qurux badan oo waxtar leh. Adeegsiga balaastiig tayo sare leh, oo aan sun lahayn iyo wax aan dhadhan lahayn. Godadka qarada caagga ah ee lagu gado Sharraxaado badan iyo qaabab ayaa la heli karaa. Hordhaca Alaabta Godka godka waxaa laga sameeyay qalab 'PP Waxyaabo la taaban karo oo loogu talagalay dadka wax qarinaaya
Godka Cayaaraha Caagagga ah ee loo yaqaan 'Restile Cave Cave NA-04 NA-05
Magaca Badeecada Magaca Suuqa Soocelinta Caagagga ah ee Caagagga ah ee Noocyada Alaabada Alaabada Alaabada Alaabada NA-04 192 * 134 * 64mm Brown NA-05 146 * 97 * 47mm Badeecada Alaabada Alaabta PP Waxyaabaha Lambarka NA-04 NA-05 Waxyaabaha Tilmaamaha Qaab-dhismeed fudud, qurux iyo waxtar leh. Adeegsiga balaastiig tayo sare leh, oo aan sun lahayn iyo wax aan dhadhan lahayn. Godadka qarada caagga ah ee lagu gado Sharraxaado badan iyo qaabab ayaa la heli karaa. Hordhaca Alaabta Godka godka waxaa laga sameeyay qalab 'PP Waxyaabo la taaban karo oo loogu talagalay dadka wax qarinaaya
Godka Cayaaraha ee Cajaladda Caagagga NA-02 NA-03
Magaca Alaabada Soosaarida Cayaaraha ee Cajalada Caagga ah ee Alaabada Noocyada Waxyaabaha Sheyga Badeecada NA-02 195 * 156 * 78mm Grey NA-03 128 * 105 * 53mm Alaabada Alaabada Alaabada PP Nambarka Noocyada NA-02 NA-03 Waxyaabaha Tilmaamaha Qaab fudud, qurux iyo waxtar leh. Adeegsiga balaastiig tayo sare leh, oo aan sun lahayn iyo wax aan dhadhan lahayn. Godadka qarada caagga ah ee lagu gado Sharraxaado badan iyo qaabab ayaa la heli karaa. Hordhaca Alaabta Godka godka waxaa laga sameeyay qalab 'PP Waxyaabo la taaban karo oo loogu talagalay dadka wax qarinaaya